Semalt विशेषज्ञले जवाफ दिन्छ किन वेबसाइट एनालिटिक्स तपाईंको व्यवसायको बृद्धि गर्न आवश्यक छ
यस प्रसिद्ध ब्लगमा स्वागत छ, जहाँ हामी वेबसाइट एनालिटिक्स र यस कार्यलाई पूरा गर्न सही उपकरणसँग सम्बन्धित सबैसँग सम्झौता गर्छौं। आजको लेखमा, हामी वास्तविक प्रश्नको उत्तर दिने प्रयास गर्नेछौं जुन प्रायः धेरै SEO प्रदायकहरूको ज्ञानबाट टाढा हुन्छ। वास्तवमा, यो प्रश्न हो: " वेबसाइट विश्लेषण किन व्यवसाय विकासको लागि अपरिहार्य कारक हो? "
यस क्वेरीको राम्रोसँग बुझ्नको लागि तपाईंलाई सक्षम गर्नको लागि, हामी यसलाई उप-प्रश्नहरूमा उप-विभाजित गर्नेछौं:
तपाईको वेबसाइटको नेभिगेसन र रूपान्तरण डेटाको विश्लेषण शुरू गर्दा तपाईको मुख्य लक्ष्य के हो?
तपाईको ग्राहकहरूको वेबसाइटको विश्लेषण गर्नु किन यत्तिको महत्त्वपूर्ण छ?
अर्को, हामी तपाईंलाई सही उपकरणको साथ परिचय गराउँदछौं, रेकर्ड समयमा तपाईंको साइटसँग सम्बन्धित सबै समस्याहरूको विश्लेषण र खुलासा गर्न सक्षम। यस कारणका लागि हामी तपाईंलाई यस बिषयमा छलफल गरिने बिभिन्न बिन्दुलाई ध्यानपूर्वक अनुसरण गर्न आमन्त्रित गर्दछौं।
वेबसाइट विश्लेषणको उद्देश्य के हो?
हाम्रो राय र क्षेत्र मा अनुभव मा, वेबसाइट विश्लेषण को मुख्य उद्देश्य राम्रो निर्णय गर्नु हो। यसले तपाईंलाई विश्लेषण र राम्रोसँग के हुँदैछ भनेर बुझ्न र त्यस अनुसार कार्य गर्न अनुमति दिन्छ। हामी तपाईंलाई यसको लागि केही संकेतहरू दिनेछौं!
प्रतिक्रियाशील विश्लेषण: मेरो वेबसाइटको विश्लेषण गर्नुहोस् जब केहि भयो
पहिलो केसबाट सुरू गरौं जुन प्रतिक्रियाशील विश्लेषण हुन्छ। यो विश्लेषण सामान्यतया गरिन्छ जब हामी याद गर्छौं कि साइटमा केहि भएको छ। यो उदाहरणको लागि भ्रमणहरूमा कमी हुने वा प्रयोगकर्ताहरूको कम नेभिगेसन हुन सक्छ।
त्यहाँ धेरै केस छन् जसमा यो विश्लेषणको लागि परिस्थितिको कारण पत्ता लगाउन प्रदर्शन गरिनु पर्छ। त्यसोभए, हामी केहि कारणहरू हेरौं जसले तपाईंलाई विश्लेषणको लागि रिसोर्ट गर्न धकेल्न सक्दछ।
यातायात मा ड्रप
पहिलो कारक जुन हामी सम्बोधन गर्न सक्छौं, एक मुख्य चर हो जुन सँधै वेब पेजमा विश्लेषण गरिएको छ: भ्रमणहरू। जब त्यहाँ भ्रमणमा ड्रप हुन्छ, तपाईंले खोजी गर्न को लागी ट्राफिकमा ड्रप विशेष च्यानलसँग सम्बन्धित छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन कोशिस गर्नुपर्छ। उदाहरण को लागी, एक जैविक च्यानल, भुक्तानी, SEO वा सामाजिक नेटवर्क।
यो पहिलो विश्लेषणले हामीलाई यो विशिष्ट च्यानलमा खस्ने कारणको बारेमा अनुसन्धान गर्न मद्दत गर्दछ। वास्तवमा, सोशल मिडियाबाट भ्रमणको मामलामा, यदि हामीले देख्यौं कि उनीहरू झर्छन भने, हामीले जाँच गर्न आवश्यक छ कि, अघिल्लो महिनाहरूमा यस च्यानल मार्फत आगन्तुकहरू प्रविष्ट भए।
त्यसोभए, हामीले हेर्नु पर्छ कि ती एक भाइरल प्रकाशन वा पदोन्नतिको एक प्रकार सेयर गर्न प्रवेश गरे। वास्तवमा, यो त्यस्तो चीज हो जुन वेबमा आगन्तुकहरूलाई आकर्षित गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न उत्तम कार्य गर्ने सामग्रीको बारेमा सुराग दिन्छ।
रेकर्ड संग्रहमा छोड्नुहोस्
यदि तपाईं लिड्समा ड्रपको मामलामा हुनुहुन्छ भने, तपाईंले फनेलको कुन विन्दुमा यो ड्रप परिणाममा देखा पर्‍यो भनेर जान्नु आवश्यक छ। यो अवतरण पृष्ठ वा प्रश्नको लेखमा दिन सकिन्छ (कम भ्रमणहरू आइपुगेपछि)। जे होस्, तपाईं CTR मा ड्रपको साथ CTA मा निर्धारण गर्न सक्नुहुनेछ, तर विशेष रूपमा फारम रूपान्तरणको मामलामा।
भ्रमणको संख्यामा रूपान्तरणको प्रतिशत
कल्पना गर्नुहोस् कि रूपान्तरण दर कायम छ, तर त्यहाँ धेरै कम आगन्तुक छन्। यस अवस्थामा हामी भन्छौ कि त्यहाँ कम सीसा छन् र त्यसैले हामीले भ्रमणको संख्या सुधार गर्न कार्य गर्नुपर्नेछ।
कुन च्यानल र कुन पृष्ठ?
च्यानल वा पृष्ठहरू विश्लेषण गर्नुहोस् जहाँ यी कमीहरू भएको छ। यो कार्यले तपाईलाई प्रत्येकलाई छुट्टै विश्लेषण गर्न अनुमति दिनेछ।
ई-पुस्तकको साथ पign्क्तिबद्धता?
तपाईको भ्रमणमा ठूलो बृद्धि भएको छ, तर तपाईको ई-पुस्तकका डाउनलोडहरू छैनन्। के तपाईंले कहिल्यै सोच्नुभएको छ कि लेख वा ल्यान्डि page पृष्ठको सामग्री तपाईंले प्रस्तुत गरिरहनु भएको ई-बुक वा स्रोतको साथ संरेखित छैन? दुई राम्रो परिणामका लागि लिंक हुनुपर्दछ।
एक्शन सीटीआरमा कल गर्नुहोस्
यदि CTA को CTR ड्रप हुँदैछ, तपाईंले केही छवि अप्टिमाइजेसन परीक्षण र/वा सामान्य साइट अडिट समस्या पहिचान गर्न आवश्यक छ।
अवतरण पृष्ठको रूपान्तरण
यस अवस्थामा, तपाईंलाई थाहा हुनुपर्दछ कि समस्याहरू उठ्न सक्दछ जब ल्यान्डि page पृष्ठको रूपान्तरण अपेक्षित गरिएको हुँदैन। यसैले तपाईले प्रतिलिपि, छवि र फारममा पनि काम गर्नुपर्नेछ, किनकि यो धेरै लामो हुनु हुँदैन।
अवतरणको प्रस्ताव स्पष्ट हुनुपर्दछ, भ्रामक र प्रस्तावमा सबै कुराको साथ पigned्क्तिबद्ध हुनुहुन्न। अर्को शब्दहरुमा, प्रस्ताव एक राम्रो उपयोगकर्ता को अनुभव सुनिश्चित गर्नु पर्छ।
सामान्यीकृत वा केन्द्रीकृत वस्तु जम्मा
विचार गर्नको लागि अर्को कुरा के हो भने लीड्समा ड्रप-अफ कुनै खास तत्वबाट आएको हो कि भनेर। उदाहरण को लागी, एक e-book, वा यदि यसको विपरित, यो वेबसाइट मा तपाइँ को प्रस्ताव को सबै संसाधनहरु बाट आउँछ।
रेकर्डको गुणस्तरमा कमी
अर्को अवलोकन जुन तपाइँले अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाइँको अधिग्रहण मात्रा कम भएको छैन, तर तपाइँले यी नेतृत्वहरूको गुणस्तरमा कमी देख्नुभयो। यसका लागि तपाईले तीन स्पष्ट प्रश्नहरुको उत्तर दिन सक्नुहुन्छ:
कहाँबाट आउँछ? यो जान्नु महत्वपूर्ण छ कि यी रेकर्डहरू कहाँबाट आउँदछन्, किनकि तिनीहरू आईटमबाट आउँदछन् तपाईंको सेवा/उत्पादनबाट टाढा। वास्तविकतामा, यस कारकले तपाईंको सेवा वा उत्पादनमा प्रयोगकर्ताको रुचि बढाउन सक्दैन। त्यसकारण, सीसाको गुणस्तर कम हुनेछ।
क्याप्चर गरिएको सम्भावनाहरूको के प्रोफाइल छ? कुन गुणात्मक विशेषता सबैभन्दा बढी प्रभावित छ? पेशा, देश, उमेर: लिडहरूको कुन प्रोफाइल हामीले लिन्छौं त्यसको विश्लेषण गर्न आवश्यक छ। यसले तपाईंलाई कुन प्रकारको सामग्री प्रत्येक खण्डमा उत्तम किसिमले हेर्न मद्दत गर्दछ। त्यसो भए तपाईले तलका तत्वहरू (पेशा, देश, उमेर) लाई लक्षित गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहनुभएको लक्षित श्रोताहरू क्याप्चर गर्न।
कुन अभियानमा गुणस्तर घट्यो? यस पक्षमा, तपाइँले देख्नुपर्नेछ कि गुणवत्ता तपाइँको सबै अभियानहरु वा एक विशेष संसाधन मा ड्रप छ कि। किनभने अभियानको प्रत्येक चरणमा तपाइँले गर्ने तरिका धेरै फरक हुनेछ।
व्यापार अवसर क्याप्चर मा गिरने
यदि तपाईंले SQL (स्ट्रक्चर्ड क्वेरी भाषा) मा एक ड्रप याद गर्नुभयो भने, त्यहाँ जाँच गर्न तीन महत्त्वपूर्ण चीजहरू छन्:
कुन च्यानल वा अभियान? सामान्यको रूपमा, तपाईले विश्लेषण गर्नु पर्छ कि कुन च्यानल वा अभियानले राम्रो डाटा रिपोर्ट गरिरहेको छैन। यो ड्रप सोशल मिडिया वा कमर्शियल एसईओबाट आउँदैछ जस्तो छैन।
रूपान्तरण: यस बिन्दुमा तपाईले जाँच गर्नु पर्छ कि रूपान्तरणमा कमी आएको नेतृत्व स्तरमा आएको कमीका कारण हो।
ग्राहक अधिग्रहण मा कमी
तपाईं फनेलको अन्तिम चरणहरू मध्ये एकमा पुग्नुभयो र तपाईंले ग्राहकको अधिग्रहणमा गिरावट देख्नुहुनेछ। यस अवस्थामा, पहिलो कुरा भनेको यो ड्रप कहाँ छ भनेर हेर्नु हो, अर्थात् फनेलको कुन बिन्दुमा यो देखा पर्दछ। यस तथ्यको लागि, तपाईंले आफैलाई निम्न प्रश्नहरू सोध्नु आवश्यक छ:
के SQL रूपान्तरणको ड्रप फनेलको बन्दबाट आउँछ? के यो फनेलको पहिलो चरणबाट आएको हो?
के यो हालको बिक्री प्रक्रियाबाट प्रभावित छ?
के अपेक्षाहरू सहि छैनन्?
यो विश्लेषणको लागि सब भन्दा चाखलाग्दो पोइन्टहरू हुन सक्छ किनभने ग्राहकको अधिग्रहणको महत्त्व व्यवसायको भविष्यका लागि महत्वपूर्ण छ।
यी सबै प्रकारका पोस्ट-विश्लेषणले तपाईलाई त्यस्तै कार्य गर्न र अपेक्षित जस्तो कार्य नगरेको उल्ट्याउँनका लागि प्राप्त डेटाको आधारमा उत्तम निर्णय लिन मद्दत गर्दछ।
अब वेबसाइटहरूको महत्त्वको दोस्रो पक्षलाई ध्यान दिनुहोस्।
भविष्यवाणी गर्ने विश्लेषण: मेरो श्रोतालाई राम्रोसँग बुझ्नको लागि मेरो वेबसाइटको विश्लेषण गर्नुहोस्
लेखको सुरूमा हामीले उल्लेख गरेको पहिलो केस भनेको माथि वर्णन गरिएका घटनाहरू हुनु अघि कार्य गर्नु र विश्लेषण गर्नु हो। यो भविष्यवाणी विश्लेषण तपाईको प्रयोगकर्तालाई राम्रोसँग बुझ्न र तिनीहरूलाई उत्तम सम्भव वेब अनुभव प्रदान गर्न गरिन्छ। यस तरीकाले, तपाईं तिनीहरूलाई खरीद प्रक्रियाको सबै चरणहरूमा लैजान सक्नुहुन्छ।
यो भविष्यवाणी गर्ने विश्लेषण गर्न र विश्लेषणलाई तपाईको फाइदाको लागि प्रयोग गर्न तपाईले कुन बुँद बिर्सनु हुँदैन? सुरु गर्नको लागि, तपाइँ निम्न प्रश्नहरूको सेट तयार गर्न सक्नुहुन्छ जुन समावेश गर्दछ, तर सीमित छैन, निम्नलाई:
कुन पृष्ठले सबैभन्दा धेरै यातायात उत्पन्न गर्छ?
कसरी प्रयोगकर्ताहरूले वेबसाइटहरूमा अन्तरक्रिया गर्दछन्?
तिनीहरू कहाँ नेभिगेट गर्छन्?
चुहावट बिन्दु के हो?
के तिनीहरूले खोजिरहेका थिए गर्न सक्छन्?
वेबसाइटमा अवधारणा किन आइपुग्यो?
कुन खोजहरूले सबैभन्दा धेरै भ्रमणहरूलाई आकर्षित गर्दछ?
रूपान्तरणका लागि सम्भावित अवरोधहरू के हुन् (कन्फ्युजनको बिन्दु, स्पष्ट प्रस्ताव, प्रस to्गसँग सान्दर्भिकता, आदि)?
लोडिंग समय इष्टतम हो वा पृष्ठ ढिलो छ?
के यो मोबाइलमा राम्रो देखिन्छ? अर्को शब्दमा, के यो "उत्तरदायी" पृष्ठ हो?
यी केही प्रश्नहरू हुन् जुन तपाईं पूर्वानुमान विश्लेषणात्मकमा सामना गर्नुपर्नेछ। तर के तपाईंलाई सही उपकरण थाहा छ जसले तपाईंलाई रेकर्ड समयमा यी सबै प्रश्नहरू सम्बोधन गर्न मद्दत गर्दछ? यदि तपाईंलाई अहिलेसम्म यो थाँहा छैन, त्यसो भए निम्नमा यसलाई पत्ता लगाउनुहोस्।
सही उपकरण कुनै समय बिना तपाईंको वेबसाइटको विश्लेषण गर्न
वेबसाइट विश्लेषण पूरा गर्न, तपाईंले सामना गर्नुपर्ने प्रश्नहरू विशाल छन्। यसैले, तपाईंको मात्र ज्ञानको साथ, यो निश्चित छ कि तपाईंले उत्कृष्ट परिणामहरू प्राप्त गर्नुहुने छैन। त्यसका लागि तपाईलाई आर्टिफिशियल ज्ञान चाहिन्छ, भन्नुको मतलब तपाईको कार्यहरू कम गर्न एक धेरै शक्तिशाली विश्लेषण उपकरण हो।
Semalt का विशेषज्ञहरु का दिमागमा यो छ र यसैले तिनीहरुले एक अत्याधुनिक उपकरण बनाएका छन जुन केवल एक क्लिकमा तपाइँको वेबसाइटहरु सम्बन्धी सबै समस्याहरूको विश्लेषण र प्रकट गर्न सक्दछ। तपाईं यस प्रसिद्ध उपकरणको नाम जान्न प्रतीक्षा गर्न सक्नुहुन्न, के तपाईं सक्नुहुन्छ?
यो उपकरण भनिन्छ SEO समर्पित ड्यासबोर्ड। एक पटकमा विभिन्न कार्यहरू ह्यान्डल गर्ने क्षमताको लागि धन्यवाद, यो पुरानो उपकरणहरूको असक्षमता दिएर बजारमा सब भन्दा शक्तिशाली उपकरण बन्न गएको छ। वास्तवमा, यो एसईओ विशेषज्ञहरु द्वारा सबै भन्दा सिफारिस उपकरण हो। यसका साथै धेरै एसईओ प्रदायकहरूले सूचना र सूचना प्रसंस्करणमा यसको क्षमता र गतिको गवाही दिन्छन्। यहाँ छन् ग्राहक प्रशंसापत्र को बारे मा विभिन्न पृष्ठभूमिबाट SEO ड्यासबोर्ड।
यसको विश्लेषण कार्य बाहेक, यससँग धेरै अन्य सुविधाहरू छन् जसले यसलाई "" "बनाउँछ। सबै-मा-एक उपकरण। यहाँ उपकरणको सुविधाहरूको एक सिंहावलोकन छ जुन तपाइँको लागि पनि धेरै उपयोगी छ:
SEO- तकनीकी अडिट
उपकरणको यो प्रकार्यले तपाईंलाई SERP डाटा प्रदान गर्न अनुमति दिन्छ। उदाहरण को लागी, कीवर्डहरू जुन TOP मा छन्, उत्तम पृष्ठहरू र प्रतिस्पर्धीहरू। साथै, तपाईं यो उपकरणसँग प्रदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ: वेब पृष्ठ विश्लेषण, पृष्ठ गति विश्लेषण र तपाईंको सामग्रीको विशिष्टताको नियन्त्रण।
यहाँ, तपाईं आफ्नो डोमेन नामको हकदार हुनेछन्। त्यसो भए, उपकरणका साथ तपाईले गर्नु पर्ने सबै कार्यहरू तपाईको नाममा हुनेछन्। तपाइँले निम्न तत्वहरू पनि थप्न सक्नुहुन्छ:
गुगल नक्शामा शारीरिक ठेगाना
को रिपोर्ट केन्द्र SEO समर्पित ड्यासबोर्ड वास्तवमा तपाईंलाई आफ्नो सबै रिपोर्टहरू पीडीएफ र CSV ढाँचामा डाउनलोड गर्न अनुमति दिन्छ। यी रिपोर्टहरू तपाईंको ब्याजको साथ पनि मार्क गर्न सकिन्छ।
SEO समर्पित ड्यासबोर्ड १ 15 भन्दा धेरै इन्टरफेस भाषाहरूमा छनौट गर्न उपलब्ध छन्। यदि तपाईं १ the भाषाहरू मध्ये कुनै एक बुझ्नुहुन्न भने तपाईं अनुरोध गर्न सक्नुहुनेछ।
यी प्रश्नहरू (र कुनै पनि अन्य तपाईं प्रासंगिक ठान्नुहुन्छ) तपाइँ तपाइँको वेबसाइट को सामग्री अनुकूलन गर्न को लागी तपाइँको ग्राहकहरु लाई राम्रो सन्तुष्टि ल्याउन को लागी अनुमति दिनेछ। यो प्रभावी ढंगले गर्नका लागि तपाईले आजको बजारको सब भन्दा शक्तिशाली उपकरण हेर्नु पर्छ - SEO ड्यासबोर्ड